Meel marinta Sharciga Hanti-Dhawraha Qaranka oo dib u dhacay waqti aan la cayimin – Kalfadhi
Meel marinta Sharciga Hanti-Dhawraha Qaranka oo dib u dhacay waqti aan la cayimin
Cod u qaadidday Xeerka Hanti-Dhawraha Qaran ayaa dib uga dhacday maanta waqti aan la cayimin. Golaha Shacabka ayaa lagu waday in kulankiisa maanta uu ku meel mariyo xeerkaas, waxa uuna ajandaha Golaha ka ahaa qeybta labaad.
Kulankii maanta, oo ay hareysay doodda Miisaaniyadda 2018-ka, ayaa waqtigii Golaha oo dhan qaadatay, Shir-Guddoonka kulankana kuma guuleysan iney waqtiga u beyqaamiyaan ajandaha.
Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, oo kulanka ka ahaa Shir-Guddoon, ayaa markii uu soo xirayey kulan yiri “Xeerka Hanti-Dhawrka waqtigii baa gabaabsi ka noqday, kulankana waa uu noo xiran yahay”.
12 Xildhibaan ayaa kulankii maanta u gudbisay Shir-Guddoonka Golaha in qodobada qaar ee Xeerka Hanti-Dhawraha Guud ee Qaranka waxa laga bedelo, hase ahaatee lalama wadaagin Golaha waxa ay qodobadaas yihiin.
Golaha Shacabka oo laga mamnuucay in dib loo hor keeno war-bixinta Guddiga Maaliyadda ee Miisaaniyadda 2018-ka
Xildhibaan Fiqi: NINKII DHUUMANAAYEE DHABARKIISU MUUQDAY!